China Farm Implement Disc Plow For Sales ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
Ipulazi Lisebenzise Idiski Elima Ukuthengisa
Igeja lediski lenzelwe ukusebenza kuzo zonke izinhlobo zenhlabathi ukwenza imisebenzi eyisisekelo njengokuphulwa kwenhlabathi, ukukhuliswa kwenhlabathi, ukuguqulwa kwenhlabathi nokuxubana kwenhlabathi. Isetshenziswa ukuvula amasimu amasha nokucubungula izindawo ezinamatshe.Ingasetshenziswa kalula ezindaweni ezinamadwala nezimpande.
Ububanzi be-disc nokucabanga
1 - Qinisekisa nsuku zonke izimo nokuqina kwezikhonkwane, amabhawodi nezikulufo.
I-2 - I-Lubrification ibaluleke kakhulu ekusebenzeni nasekulondolozweni kwezingxenye ezihambayo zanoma iyiphi imishini. Zenze ujwayelane nohlelo lokuthambisa kanye nezikhawu.
3 - Gcoba ngokucophelela wonke amaphuzu okugcoba, usebenzisa igrisi yekhwalithi kuphela, ugweme ukungcoliswa ngumhlaba, amanzi. Musa ukwengeza ngokweqile futhi ususe ngokweqile.
4. Lapho igeja lediski lingasetshenziswa isikhathi eside, nikeza lo msebenzi umsebenzi wokuhlanza nowokupenda ojwayelekile. Ngaphambi kokuyigcina, inike isifutho ngamafutha okuvikela, ifaka nama-disc.
5. Qiniseka ukuthi usebenzisa amathuluzi anele lapho wehla futhi ufaka okokusebenza.
1 - Uma usebenzisa i-equipament qiniseka ukuthi akekho ohlala esondele noma efanayo.
2 - Ngesikhathi somhlangano, ukufaka noma ukuqaqa amadiski, sebenzisa amagilavu.
3 - Ungagqoki izingubo ezigqokile ezingabamba umshini.
4 -Ngaphambi kokuba uqalise injini kagandaganda, hlala phansi uqiniseke ukuthi uyakwazi ukusebenza kukogandaganda nokusebenzisa. Qinisekisa ukuthi isigwedlo segiya sisesimweni sokungathathi hlangothi, futhi isigwedlo se-hydraulic sisesimweni sokungathathi hlangothi.
5- Uma uhlohla okufakwayo kugandaganda, qiniseka ukuthi kukhona indawo eyanele nokuthi akekho umuntu oseduze ongabanjwa.
6- Misa injini kagandaganda lapho kunesidingo sokwenza ushintsho ekusebenzeni.
7. Lapho usebenza endaweni eyehlelayo emigqeni, gcina njalo engqondweni ukuzinza komshini futhi uma kwenzeka kuqalwa ukungazinzi, bhekisa igquma logandaganda phansi futhi ungalokothi uphakamise ukusebenzisa. Yehlisa isivinini ngasikhathi sinye.
8. Shayela njalo ngejubane elihambisana nezimo zendawo noma zomgwaqo.
Langaphambilini Umlimi we-3Z Wokotini Wommbila Wesoya
Olandelayo: Umshini Wokukhulula Umhlabathi Wezolimo